ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်၏အိပ်မက်များ၏မိန်းမနဲ့ကိုဆွဲဆောင်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဒီဇင်ဘာ. 11 2019 |5မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို, လူတို့နှင့်အတူအများအပြားရက်စွဲများအပေါ်သွားသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး, နောက်ကျောငါ့ချိန်းတွေ့နေ့ရက်ကာလ၌. ဒါနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူတွေကိုအများကြီးကြည့်ဖို့ထ, ချိန်းတွေ့ဖို့အကြံဥာဏ်များနှင့်နီးလာ. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူကယ့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အမျိုးသားတွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းအတွင်းကျုံးမျှဝေဖို့သွားရမည်, နှင့်စတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ရက်စွဲသို့မဟုတ်ရပ်ရွာအပေါ်ထွက်ရှိပါတယ်သည့်အခါဘေးဥပဒ်နှင့်တူမှရှောင်ရှားရန်အဘယ်အရာကို.
Romance ကိုသူမ၏ – ကျမတို့ဆီမှာအမျိုးသမီးဖြစ်လာချိတ်ဆက်ခံစားမှုကနေတဆင့်လူကိုဆွဲဆောင်, ဒီကအကြှနျုပျယုံကွညျအများစုကိုအမျိုးသားတွေများအတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်မှာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်. ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆွဲဆောင်မှာခံစားနေတဲ့လူကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်မနိုင်, သို့သော်သူနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်သူကိုငါတို့အပေါ်မှာအနိုင်ရနိုင်သလိုလုံးဝကိုသူ့အဘို့လဲကျ. ဒါတွေအားလုံးသည်အချိန်ဖြစ်ပျက်. ဒါကြောင့်ဒီကိုသုံး. Romance ကိုသူမ၏. ခေတ်အဟောင်းပုံနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်ပါနဲ့ – ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုကြာမြင့်သောအခါငါအံ့သြဖွယ်မခံစားရမည်သူတစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောမိန်းမမသိရပါဘူး. သူသည်သင့်ကိုသွားအပိုအားထုတ်မှုသတိပြုမိလိမ့်မည်, ပန်းပွင့်, သူမ၏ကုလားထိုင်နောက်ကျောဆွဲ, ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုတံခါးလာပြီး. သူမ၏ဦးခေါင်း၌သူမကခေတ်အဟောင်းဖြစ်ယုံကြည်သည်ရင်တောင်, သူမ၏စိတ်နှလုံး၌သူမကပဲအရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်, သင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်, ဘယ်နေရာမှာကြောင်း!
ဆပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကို - ဒီကယ့်ကိုအထက်နှင့်အတူနှောင်. ငါသည်သင်တို့ကိုကောင်းတစ်ဦးစိတ်စွဲမှတ်စေလိုလျှင်သင်သည်ထိုသူတို့ drop နှင့်ဥပဒေကြမ်းခြေအကြံပြုပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်မည်သို့ပင် Hang-ups. သိလို အဘယ်ကြောင့်? တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ပေးဆောင်သင့်ကြောင်းလောက်သောငါ၏အဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ.
သူမ၏ချီးမွမ်း (ဒါပေမယ့်မလွန်လွန်း) - တစ်ဦးကအသေး, စစ်မှန်သောချီးမွမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကောင်းခံစားမိအောင်ဖို့အရမ်းကြာမြင့်စွာလမ်းဝင်, ပင်အအေးဆုံးနှလုံးအရည်ပျော်နိုင်. သို့သော် Over-လုပ်နေတာကြောင့်သတိထားဖ​​ို့. သင်၏နှုတ်ထဲကမြွက်သည်အခြားစကားလုံးချီးမွမ်းလျှင်အကယ်လို့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာနိုင်ပါသည်.
ရေခဲကိုချိုးဖျက်ဖို့ပျော်စရာသုံးပါ - သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာလက်ကိုစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ရေခဲကိုချိုးသူမ၏သိရန်ဆိုတော့ပျော်စရာကြသည်နေတုန်းချိန်းတွေ့တင်းမာနေသောအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည်, အစားပိုအလုပ်တစ်ခုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဲ့သို့ထွက်လှည့်နိုင်သည့်တင်းမာမှုကိုပြည့်ဝ bar မှာရက်စွဲသို့မဟုတ်ညစာထက်! ဒီနေရာမှာ Go: အချို့သောမဟာအိုင်ဒီယာများအတွက်ထူးခြားတဲ့ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်များနှင့်ကိုဒီမှာဖတ်: connection ကိုဆောက်လုပ်ဖို့နည်းကိုတွေ့ရှိဖို့ပထမဦးဆုံးအံ့သြဖွယ်ရက်စွဲစီစဉ်ထား.
တင်းမာမှု Build - တင်းမာမှုတည်ဆောက်ရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုလျှော့ချရွေ့ထိုသူတို့ကြိုက်နေတဲ့မိန်းမနှင့်ဆွဲဆောင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အမျိုးသားများကအသုံးပြုခဲ့ကြပြီနည်းပညာတွေကိုကြိုးစားစမ်းသပ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်လိင်ပိုးမွှားဖြစ်လာမဆိုလိုပါဘူး, သို့သော်ပျော်စရာတစ်ခု bit နဲ့, အဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောပရောပရည်လုပ်ခြင်းကယ့်ကိုပူပြင်းသောအရာတို့ကိုဖွင့်နိုင်. ကျီစားနေသမျှကာလပတ်လုံးက overdone မဖြစ်သကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆောက်လုပ်ဖို့နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခါတုန်းကအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံရန်သူ၏အဓိကလမ်းအတိုင်းဤအသုံးပြုသူတစ်ဦးကောင်လေးရက်စွဲပါ. ပထမဦးဆုံးမှာပျော်စရာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုပြီးနောက်လွင်ပြင်အတော်လေးအလုပ်ရှုပ်ခဲ့. လည်း, တင်းမာမှုအဆောက်အဦး၏အစိတ်အပိုင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်လွတ်လပ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်တယ်, သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့အပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာတောင်.
whiney ဖြစ်ခြင်း - အမှုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံညည်းသံသူတွေကိုထိုကဲ့သို့သောအလှည့်အပိတ်ရှိပါတယ်. အလေးအနက်ထား. သင်တို့ရှိသမျှကိုငါအချိန်ကို moans သူတစ်ဦးကိုသိလျှင်သင်လို့မရပါဘူးသေချာဖြစ်ကြောင်းကို. သင်မထင်စေခြင်းငှါ, သို့သော်, ကသို့ကိုယ့်စစ်ဆေး. တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာပင်သတိမရမပါဘဲညည်းတွားနှင့်ညည်းသံ. သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူတိုင်ကြားလိုပါနဲ့? သင်နှင့် ပတ်သက်. ညည်းတွားပါနဲ့: မိုးလေဝသ, သင့်ရဲ့အလုပ်, စီးပွားရေး၏ပြည်နယ်, မိန်းမများသင်ရက်စွဲ? သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထိုသို့ပြုလျှင်သင်ချိန်းတွေ့ကြသောအခါ သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ပြုအခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, ထိုသို့အလေးအနက်ထားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချွတ်ပယ်နိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ရက်စွဲများအပေါ်အကြောင်းကိုပြောသောအရာကို၏စိတ်သည်ဖြစ်လာ, နှင့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဘာသာစကား.
အဓိကမလုံခြုံမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့် - OK ကိုဒါငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောမလုံခြုံမှုရှိသည်, ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတက် bottling ဘို့တမဟုတ်, သို့သော်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲကိုသင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မှဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မလုံခြုံမှုလေထုရာအရပ်ကိုမဖြစ်, ငါသည်သင်တို့ကိုပြုလျှင်သင်တို့ကိုမဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့်! ထူးဆန်းသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကနှစ်သက်ဖွယ်သို့သော်တစ်ဦးသည်ကြီးလေးသောလူနည်းစုဖြစ်လိုတွေ့စေခြင်းငှါ. အမျိုးသမီးအများစုအဘို့ဤကျွန်တော်တို့ကိုအအေး running လိမ့်မည်. တစ်ခါတုန်းကသူသည်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုခဲ့သည်ထင်သလော, ငါ့အားတောင်းဆိုနေတာစတင်ခဲ့သူတစ်ဦးကောင်လေးရက်စွဲပါ, နှင့်ကိုယ်တော်ပြုတော်မူခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့မလုံခြုံမှုရာအရပ်မှကြွလာတော်မူငါ့အားပြ. သူကစက်စက်ကျမည်မဟုတ်. ဤသူသည်ငါ့ကိုမေးခြင်းထားရှိမည်, ငါသည်သူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှာခဲ့? ထို့နောက်ထိုသူသည်ငါသူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးသူကခန့်အတော်လေးရယ်စရာရရင်မျှမအမှတ်ချိန်းတွေ့ရှိ၏ဟုပြော ဆို. စတင်. သမ္မာတရားကိုကျွန်မဘယ်လိုခံစားခဲ့ရငါ့စိတ်ထဲထအောင်ခဲ့ခဲ့သည် (ဆွဲဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးသမီးများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကိုသတိရ) သို့သော်သူကဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြိမ်တိုင်းနှင့်အတူငါ့ဆွဲဆောင်မှုဆင်းသွားလေ၏. ထိရောက်စွာသူသည်အခြားရက်စွဲရတဲ့အထဲကထွက်သွားမိမိကိုမိမိစကားပြော. ကုထုံး၌သင်တို့၏အရေးကိစ္စများကိုထွက်အလုပ်လုပ်, သို့မဟုတ်အိမ်တွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်, မသင့်ရက်စွဲများအပေါ်. ဒါ့အပြင် Note - မလုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုမတူကြတာ!
သင့်ရဲ့ဖြစ်သူအကြောင်း Bitching - ဒါကငါ့အဘို့အဆိုးရွားဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့်မြန်ဆန်ချောကလက်ပူပြင်းတဲ့နေ့၌အရည်ထက်ကောင်းတစ်ဦးလေးကိုချွတ်ငါ့ကိုအသွင်းမည်. အိုကေ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖြစ်သူကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးခ * tch ရှိခဲ့ကြပေမည်, နှင့်ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါကလေးငါးယောက်နှင့်အတူထဲသို့ကျိုးပဲ့သင်စွန့်ပစ်, ဒါပေမယ့်သင်ချိန်းတွေ့နေသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသေးသင်သိပါဘူး. သင်သည်သင်၏ဖြစ်သူ mouthing မကောင်းတဲ့စတင်လျှင်သူသည်သင့်အားထက်သင့်ဟောင်းမှ ပို. သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါ့အပြင်သူမသင်သူမနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်စေမည်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်. ချိန်းတွေ့အစောပိုင်းအပေါ်ဖြစ်သူရဲ့တက်ရှိမယ်ပဲမကောင်းတဲ့ပုံစံနှင့်လုံးဝမလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် (တကယ်တော့ငါသည်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်သူရဲ့ဆောင်ခဲ့သည်မကောင်းတစ်ဦးအမှုလုပ် အစဉ်!) အဘယ်အရာကိုအရေးပါပါတယ်သင်မည်သူဖြစ်သည် NOW က, သင်၏အရှေ့တွင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်အတူ.
အဓိက Hang ups ရှိခြင်း (ဤကျွန်တော်တို့ကိုအနီရောင်အလံများတူအောင်!) - အားလုံးအပေါ်ကကြည့်ရှုပါ. ဟန် ups စသည်သင်တို့အပေါ်မှာပါပြီကြောက်မက်ဘွယ်သောရက်စွဲများအကြောင်း ranting ပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်အကယ်လို့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ခံစားရစေတယ်ကြောင့်သူသည်သင့်ကိုမခေါ်မမူကြောင်းကိုဝေဖန်ခံရ, သင်တို့အပေါ်မှာပါပြီရှိသမျှတို့သည်အရက်စွဲများကိုချွတ် slagging, ဥပဒေကြမ်းစသည်တို့ကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ညည်းတွား. ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်လေးကဘောင်းဘီကိုတင်ဖို့အချိန်ဒါဟာင်. တစ်ခါတစ်ရံမှာဘဝမျှတကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, သင်ချိန်းတွေ့ဂိမ်းအတွက်ရှေ့ဆက်ရချင်တယ်ဆိုရင်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်ပဲတက်ကိုစို့ကြရ! ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်အရည်အတွက်စွပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုထွက်ရရန်ရွေးချယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ကုလားကာ-ups drop နှင့်ပဲပျော်စရာအဘို့အချိန်းတွေ့ခြင်း၌ပျော်မွေ့, ခန့်မှန်းရခက်, တခါတရံအရူးအတွေ့အကြုံကရှိနိုင်ပါသည်.
အားလုံးအပေါ်ကရုံကိုမမေ့လျော့သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်! - ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တကယ့်ပြောခဲ့ပါ. လမ်းညွှန်ချက်များစာရင်းသင်ယူခြင်းနှင့်အောက်ပါတခါတရံတွင်သင်သည်တောင့်တင်းနှင့်သင့်ရက်စွဲများအပေါ်နေကြတာသဘာဝစေနိုင်သည်. ဒါကြောင့်အကြံဥာဏ်ဖတ်ကနစ်ခွင့်ပြုပါရန်အုပ် mull မှကြီးလှပေ၏နေစဉ်, စုံလင်မ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို. လမ်းညွှန်မယ့်အစားတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေအဖြစ်အားလုံးနှင့်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်ကိုယူ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အမှုအရာတို့ကိုထုတ်စမ်းကြည့်ပါလူအပေါင်းတို့နှင့်အထက့်ပျော်စရာဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ရှိသည်ဖို့သတိရပါ!